स्थानीय तह निर्वाचन : छिटफुट घटनाबाहेक उत्साहप्रदरूपमा मतदान सम्पन्न, कहाँ कहाँ के भए ? - Himalaya Television
स्थानीय तह निर्वाचन : छिटफुट घटनाबाहेक उत्साहप्रदरूपमा मतदान सम्पन्न, कहाँ कहाँ के भए ?
२०७९ वैशाख ३० गते १८:२०
३० वैशाख २०७९ काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि आज भएको मतदान छिटफुट घटनाबाहेक उत्साहप्रदरूपमा सम्पन्न भएको छ ।
केही ठाउँमा झडप र विवाद भएका छन् भने केही ठाउँमा कुटपिटका घटनासमेत भएको जनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचन स्थगित गरेर अर्काे दिनका लागि मिति तय गरिएको छ । केही क्षेत्रमा केही बेर अवरुद्ध भएर पुनः मतदान सञ्चालन गरिएको थियो ।